Miditra amin’ny andiany faharoa ny fampianarana informatika maimaimpoana ho an’ireo tanora ao Ambohimanarina ary misy fampianarana asa tanana zaitra sy asa tanana. Fokontany maromaro no amboarina ny lalankely sy ny tetezana, asiana fanasan-damba,... Mba tsy hisian’ny filaharana rano intsony, dia hametraka “pompe à main” maimaimpoana izy. Nambarany fa rehefa tsy mahavita ireo mpitantana dia tokony hametra-pialana na hesorina ka tsy ny Talen’ny Jirama ihany no halana fa eo ihany koa ireo tompon’andraikitra hafa toy ny minisitra. Nambarany fa tsy Ambohimanarina ihany no mila vahaolana fa ny vahoaka Malagasy rehetra. Miakatra izao ny rano, ka manao antso avo amin’ny APIPA, minisiteran’ny rano, minisiteran’ny fambolena, minisiteran’ny fananan-tany,… fa tsy mety mihitsy ity fanotorana tany ity izay manimba ny famelomantenan’ny vahoaka mpamboly, hoy ity depiote io. Ny fako mila jerena. Ho azy, dia mahakivy ny asan’ny governemanta, hita mihitsy hoe tsy misy zavatra mandeha, ka mikaikaika ny olona, raha tsy hilaza afa tsy ny vidim-piainana. Nisy ny fampanantenana nataon’ny fitondrana fa tsy nisy tanteraka izany, raha ho an’ny boriborintany fahenina. Aoka ny vahoakan’Ambohimanarina tsy hampijaliana amin’ny resaka fotodrafitrasa fa ny depiote Todisoa kosa hanao izy tratry ny heriny hikaroka mpiara-miombon’antoka rehefa tsy hanao ny fanjakana, hoy hatrany izy. Hiezaka hametraka tobin-janaparitra (poste avancé) koa izy mikasika ny tsy fandriampahalemana ao Ambohimanarina.
Toky R sy Sitraka r.